Muuri News Network » DEG DEG: Wasiir Cabdalla Xuseen & Xildhibaan Ibbi oo u duulay Kismaayo..(Ujeedka)
DEG DEG: Wasiir Cabdalla Xuseen & Xildhibaan Ibbi oo u duulay Kismaayo..(Ujeedka)
Jun 13, 2016 - Comments off
Waxaa la filayaa in ay saacadaha soo socda uduulaan caasimadda kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland wafdi ka kooban wasiiro iyo xildhibaano ka soo jeeda beesha Biimaal.
Wafdigan ayaa ka koobnaandoono wasiirka beeraha dowladda federaalka soomaaliya; Mudane Ugaas Axmed Bile (gaboobe), wasiir K/xigeenka gaashaandhiga Mudane Cabdalla Xuseen iyo weliba xildhibaan Cabdiraxmaan Xaaji Aadan Ibbi.
Wafdigaan ayaa goor sii horeesay ka helay Casuumaad rasmi ah Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe; Wafdigan iyo madaxweynha ayaa ka wada hadli doona qaabka ay beesha ugu soo xullandoonta magaalada Kismaayo xildhibaanada ay kaheli doonto labada aqal ee Barlamaanka lafilayo in ladhiso 2016ka bisha August.
Wafdigan ayaa waxa ay booqashadooda qaadandoontaa muddo 2ba cisha ah; inta ay Magaalada joogaan waxa ay sidoo kale la kulmi doonaan odayaasha dhaqanka Beesha iyo Xildhibaanada beesha ay kulledahay Jubbaland si ay isaga xog wareystaan
Wixii qaladaad ah oo ay beesha tabaneyso si loo saxo isla markaana xal waara looga gaaro. Wixii war ah ee ka soo baxa kulamada ay yeeelandoonan wafdigan iyo Madaxweynaha Jubbaland waxaad kala socondoontaan shabakadda Muurinews.com.
ISH WARARKA OO—DHAN